ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ဒီမိုကရေစီ မကျင့်သုံးချင်သူတွေ အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဟောပြော
Nyein Aye နေရပ်- Myanmar :
အာဏာရှင် လက်ပါးစေတွေရဲ့စကားလုံးတွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို အာဏာရှင်ကိုဖါးချင်ဇော နဲ့သေးသိမ်အောင် မျက်စေ့ စုံမှိတ်ပြီး ပြောနေတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ ဆန့် ကျင်နေတယ် ဆိုတာ မသိရှာဘူး။ ပုထုဇဉ်တွေဟာ လောဘ မောဟ ဒေါသတွေ များကြလို့ ပယ်သတ်ဖို့ တောင် ဘုရားကဟောထားတယ်။ ဘယ်သူမှမချမ်းသာခြင်တဲ့လူ ခေတ်မီတိုက်နဲ့ မနေခြင်ပဲ ၀ါးတဲနဲ့ နေခြင်တဲ့လူ မရှိဘူး။ ကိုယ့်သားသမီးကို နိုင်ငံခြားလွှတ်ပညာသင်ခြင်တဲ့လူချည်းပါပဲ။ ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာပညာသင် နေကြရတာက အင်မတန် မလွှဲသာတဲ့လူတွေပါ။ ဘယ်လောက်ရာနှုန်းရှိမှာလဲ။ အဲဒီလိုပြောသလိုသာ တင်းတိမ်နေကြမယ်ဆို ဘုရားတောင် လောဘ မောဟ ဒေါသ ပယ်သတ်ဖို့တရားဟောစရာ မလိုတော့ဘူး။ အာဏာရှင်နောက်လိုက်တွေ လေသံမှန်းသိတ်သိသာတယ်။ အာဏာလက်လွှတ် ရမှာ အတော်စိုးရိမ်နေပုံပဲ။
(Yangon. နေရပ်- Yangon. :
ပြည်သူတွေဆန္ဒ ပြကြတာက ဒီမိုကရေစီနဲ့မထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ငါးဆယ်က အာဏာရှင်တွေရဲ့ မတရားပြုကျင့်မှုတွေကြောင့်ပါ။ မြန်မာ စစ်တပ် ဟာ ဗကပ အတွင်းစည်းထဲကို လူယုံ ဓါးလျှိုတွေ သွင်းပြီး အမြစ်ပြုတ်အောင် ဖြိုခွင်း နိုင်ခဲ့တာကို ကောင်းကောင်းသိသွားတော့ ကျန်တဲ့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူကျောင်းသားတွေအတွင်း၊တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အတွင်း ကိုလည်ုး လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် သုံးလေးဆယ် လောက်ထဲက ဓါးလျှို တွေ ထည့်ထားပြီး ဖြိုခွင်းရေးလုပ်ငန်း အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ ကိုလုပ်နေခဲ့တယ်။အဲဒါကို အထက်က လူကြီး လေးငါးယောက်လောက်ပဲသိတယ်။ ပလီတွေကိုခဲနဲ့စပေါက်တာလဲ အနားမှာနေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲကပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူး။ အမှိုက်ကားနောက်မှာ အရောင်ဆောင်စီးလာတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကစလုပ်တာ။ အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ လုပ်ခြင်တာဟာ ဘုရားဟောအတိုင်းပါလို့အမြဲ ဘာသာရေးနဲ့ မှိုင်းတိုက်တာ ပြည်သူကရိုးနေပြီ။
Pyay Nyein နေရပ်- Myanmar :
မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာ အာဏာရှင်တွေနဲ့သူတို့ ရဲ့ မွေးစားသားတွေက ပြည်သူကိုစော်ကားတဲ့လေသံတွေပဲ။ စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာ တပ်မတော်ဟာ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေး ရှုပ် ထွေး အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဥပမာ တ၇ုပ် ဗမာ အရေးအခင်းမှာ ဆန်ပြဿနာ ဖန်တီးတာတို့၊ ၈၈ အရေးအခင်း ကာလမှာ ထောင်ဖွင့်ပေး လိုက်တာတို့ ဂိုတောင်တွေ ဖွင့်ပေးလိုက်တာတို့ ၊ ဟိုနေရာဒီနေရာ ဗုံးလိုက်ခွဲပြီး နိုင်ငံရေးသမား တွေကျောင်းသားတွေ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘဲ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေသယောင်၊ ထောက်လှမ်းရေး တွေ က မီးပွိုင့်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီး ဆန္ဒပြသူတွေကဘဲ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်သယောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်။ (မီးပွိုင့် တစ်ခုဆီကို လည်ကတုံး အင်္ကျီအဖြူရောင်နဲ့ ကချင်လုံချည် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက Mazda လေးဘီးကလေးနဲ့ လာပြီး မီးပွိုင့်ကို လောက်လေးခွ နဲ့ပစ်ခွဲတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကလူတွေ ကိုလဲ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ရင် ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ ငေါက်ငန်းလိုက်သေးတယ်)။
စစ်တပ်ဆိုတာ နိုင်ငံ(သို့)ပြည်သူ ရဲ့ တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းဘဲ။ အဲဒါကြောင့် တစ်စိပ်တစ်ပိုင်း လူနည်းစု က နိုင်ငံ(သို့)ပြည်သူ အားလုံးရဲ့ ကံကြမ္မာ ကို ဆုံးဖြတ် တာဟာ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးတာဘဲ။
တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး တဲ့နိုင်ငံတွေ ကိုကြည့်ပါ။ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်တာ စစ်တပ်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး ချင်ရင် ပညာညဏ် အမြော်အမြင် ကြီးပြီး ကမ္ဘာ ကိုရင်ပေါင်တန်း နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး သမား ကို ခေါင်းဆောင်စေရမယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဗိုလ်နေ၀င်း တို့ ဗိုလ်သန်းရွှေ တို့က နိုင်ငံရေး သမားတွေ ကို အမုန်းရန်ငြှိုးထားပြီး ညစ်ပတ်စုပ်ပဲ့တဲ့ အကြံ နဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ ပြီး အမြစ်ပြတ်ချေမုန်း ခဲ့တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်နိုင်မဲ့ နိုင်ငံရေး သမား ကွင်းဆက် ပြတ်သွားတဲ့ အတွက် တိုင်ပြည် စုတ်ပြတ် သွားတာ သာဓကဘဲ။
Jan 04, 2015 08:10 PM
Democracy is only justa'Way': not our 'Goal'.
Our 'Goal' is to become Modern Developed Prosperous Country.
Democracy makes many riots & mobs in practical and to be delayed the works of development. Late UN General Secretary U Thant said that Democracy shall make disorders in low intelligent countries. There's many riots & mobs in Democracy Country practically. Myanmar should avoid extreme right and extreme left. Myanmar will go on middle path by the teaching of the Buddha.
Jan 04, 2015 06:36 AM
" ပြည်သူတွေကလည်း စည်းကမ်းရှိတဲ့ပြည်သူဖြစ်လာဖို့ ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော " Our education system has been totally devastated, and most of the people have no clue for how to enter into the systems, how to set up the systems, and when they have to use the systems available for them. An education system which exercises and teaches moral codes for democratic society should be included in the first step towards Democratic Society in Myanmar. Please visit to http://www.nytimes.com/2006/09/29/opinion/29myint-u.html?pagewanted=print&_r=0